Talooyin ku saabsan in tuubooyinka qolkaaga musqusha ay noqdaan kuwo aan dhibic lahayn oo aanay dareerin - Tubooyinka Jikada ugu Fiican 2021 | Tubooyinka Musqusha ee ugu Fiican | WOWOW qasabadaha
Bogga ugu weyn / blog / Talooyin Ku Saabsan Ilaalinta Tuubooyinka Musqushaada Meel La'aan Iyo Biyo la'aan
2021 / 09 / 25 Qoondayntablog 4205 0
Tubbada musqusha oo hadda la nadiifiyey, oo aan bar -bar lahayn ayaa noqon karta waxa aad u baahan tahay oo dhan si aad u qaddariso qurxinta musqushaada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in qasabadaha musqusha aysan nadiif ahaan doonin muddo dheer haddii aan si joogto ah loo siin daryeel habboon. Dhibaatada ugu weyn ee dayactirka qasabadaha musqusha, oo ay ku jiraan qasabadaha musqusha, qasabadaha musqusha, qasabadaha musqusha iyo qaar ka mid ah qalabka musqusha, ayaa ah inay u muuqdaan inay si fudud u uruursadaan wasakhda biyaha. Tani waxay ku abuuri kartaa aragti xun muuqaalka guud ee musqushaada.
Haddii aad rabto inaad gaarto musqushaada muuqaal aan dhib lahayn, markaa waa kuwan talooyin khabiir ah oo aad si fudud ugu ilaalin karto qasabadaha musqushaada. Fadlan sii akhri.
- Fahamka qasabadda dhammaato: Isbeddellada qurxinta musqusha ayaa aad isu beddelay waqti ka dib. Waa dhammaatay maalmihii dadku ku rakibi jireen musqulaha musqusha kaliya biraha ama biraha qasabka, qasabadaha musqusha iyo qalabka kale ee musqusha. Iyada oo la casriyeeyay qurxinta musqusha, qasabadaha musqusha ayaa lagu heli karaa xulashooyin badan oo dhammeystiran. Laga soo bilaabo naxaas, naxaas, galaas, bir, iyo dhawr fursadood oo xiiso badan, shuruudaha dayactirka qasabadda ayaa si weyn ugu xirnaan doonta dhammaadka qasabadda musqusha. Sidaa darteed, waa inaad lafagurtaa si aad u ogaato nadiifiyaha ugu fiican nadiifinta.
- Isku day isku dar ah saabuun qalalan iyo biyo diiran. Haddii wasakhda ama dhibco biyo leh ay ku urureen qasabadaha musqushaada, markaa waxaad isku dayi kartaa inaad ku nadiifiso adigoo kaashanaya saabuun qalalan iyo biyo diiran. Isku qas isla markaasna isticmaal maro nadiifin jilicsan si aad meesha uga saartid wasakhda iyo dhibcaha adag. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad ku masaxdo saabuunta weelka wax lagu dhaqo ka dibna ku qalaji maro qalalan oo aan la isticmaalin si aad u hesho muuqaal dhalaalaya.
- Isticmaal khalka cad si aad uga saarto wasakhda: Haddii qasabadda weelkaagu ay dhisatay wasakh oo aadan ka saari karin, markaa waxaad ka fiirsan kartaa inaad isticmaasho khal cad si aad uga saarto. Isku day inaad ku darto nus koob oo khal cad ah nuska kale ee biyaha kulul. Waxaad markaas dhex gelin kartaa maro nadiifin ah si aad uga takhalusto wasakhda madax adag ee ku urursan qasabadda musqushaada. Waxaa lagugula talinayaa inaad tijaabiso qayb yar oo ka mid ah qalabka musqusha oo leh xalkan si aad u hubiso inaadan dhaawicin dusha sare ee qalabka.
- Xalka ugu dambeeya ee soodhaha iyo xalka cadayga. Soodhaha la dubay waa budo la yaab leh oo leh codsiyo dhammaan dhinacyada nolosha. Maaddada jikadaani waxay kaloo kaa caawin kartaa inaad ka saarto wasakhda iyo dhaldhalaalka alaabta musqushaada. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa inaad ku xoqdo qayb ka mid ah soodhaha soodhaha aagga ay dhibaatadu saameysey oo leh buraash qoyan oo qoyan. Tani waxay u dhaqmi doontaa sidii qashin -qubka dabiiciga ah waxayna ka saari doontaa dhammaan wasakhda xun ee qasabadaha musqushaada.
- Samee nadaafad joogto ah. Haddii aadan doonayn inaad dhidid maalinta oo dhan si aad uga saarto wasakhda qalabka musqusha, waxaad badbaadin kartaa naftaada waqti iyo tamar adiga oo si joogto ah u nadiifiya qalabka suuliga. . Waxaad ballansan kartaa maalin maalmaha ka mid ah toddobaadka si aad si habboon u nadiifiso dhammaan qalabka musqusha.
Talooyin Si Aad Musqushaada Uga Dhigto Mid Xor Ah
Yaa jecel musqusha biyo -mareenka ah oo ay biyuhu ka dareerayaan qasabadda musqusha kasta, oo ay ku jiraan qasabadaha musqusha, saxammada iyo qalabka kale ee musqusha? Sababtoo ah dabeecadda biyaha si ay uga soo dhex baxdo meelaha ugu yar, waxaa lama huraan ah inaad musqushaada ka dhigto mid aan ka bixin meel kasta duruuf kasta. Intaas waxaa sii dheer, marka laga reebo ka hortagga biyaha inay ku soo ururaan musqushaada, waa inaad sidoo kale keydisaa biyaha kharash kasta. Sidaa darteed, haddii aad tahay qof feejigan, markaa waxaad qaadi kartaa tallaabooyinka hagaajinta soo socda si aad musqushaada uga dhigto, oo ay ku jirto qasabadda musqusha, bilaa-bax
- Ku rakib foornada foornada. Foornooyinka foornada ayaa cadeeyay inay aad ugu fiican yihiin darbiyada iyo albaabada maadaama aysan saameyn ku yeelan daadinta caadiga ah. Tan waxaa u sabab ah kootada cufnaanta sare ee maaddada porcelain. Awoodda foornada foornada si ay u nuugto biyaha ayaa ah mid aad wax ku ool u ah in foornooyinkan ay sidoo kale ka heleen qaababka musqusha qaab dhismeedka musqusha ee casriga ah. Marka laga reebo sifooyinka waaweyn ee ay bixiyaan taayiradaan, foornooyinka foornadu sidoo kale waxay u muuqdaan kuwo soo jiidasho leh sababtuna waa dhaldhalaalka dhalaalaya iyo dhammaadka matte ka dhigaya inay biyaha u adkaystaan. Waxay sidoo kale yihiin kuwo aad u waara, taasoo ka dhigaysa doorashada ugu fiican ee qasabadaha musqusha.
- Ha u oggolaan wax daloollo ah isku -xidhka tuubooyinka. Musqulaha badankood waxaa loogu talagalay dhuumaha PVC ee qarsoon. Xidhiidhyadan biibiilaha ayaa u nugul daloollada. Sidaa darteed, laabatooyinkan waa in lagu shaabadeeyaa caawinta cajalad aan biyuhu lahayn. Waa inaad hubisaa inaysan lahayn wax dalool ah kala -goysyada beebka. Intaa waxaa dheer, tuubooyinku waa inaysan lahayn wax qalloocan, haddii kale, waxay u nuglaan karaan daadinta.
- Sii sagxad jilicsan dhulka. Tani waa farsamo fiican si aad musqushaada uga ilaaliso inay ka baxdo oo waliba uga hortagto waxyeello biyo ah. Markaad naqshadeyneyso booska musqushaada, waa inaad weydiisataa xubnaha kooxda ay khuseyso inay siiyaan jaranjaro dabacsan xagga biyaha si biyuhu si dabiici ah ugu qulqulaan jihadaas. Jiirada ugu fiican ee aagga musqusha badiyaa waa inta u dhexeysa ¼ inch iyo 1/8 inch per foot. Waxa intaa dheer tan, waxaa laga yaabaa inaad doonaysid inaad tixgelisid inaad haysato dhibco badan oo biyo -mareen ah inta lagu jiro qolka musqusha si aanay biyuhu u xirmin ama u dhicin.
- Meel ammaan ah oo leh koollo aan biyuhu lahayn Wakhtiyadan dambe, habkii hore ee lagu ilaalin jiray foornooyinka musqusha iyo qasabadaha musqusha sibidh iyo ciid ayaa lagu beddelay adeegsiga dhejisyo habboon. Koollada la heli karo ayaa ah budo sibidh oo qallalan oo diyaarsan oo lagu qaso biyo si ay u sameeyaan dhareer dhejis ah oo qaro weyn leh. Marka lagu isticmaalo foornooyinka musqusha iyo qasabadaha musqusha, waxaa la samayn karaa inay si adag isu haystaan ​​meel muddo dheer ah. Astaamaha adkaynta iyo ka -hortagga biyaha ee dhejiska ayaa ka hortagaysa wax kasta oo biyo -bax ah.
- Dooro dahaar aan biyuhu lahayn Musqusha waa aagga guriga oo ay ka muuqato qoyaan iyo qoyaan xoog leh. Sidaa darteed, waxaad dooran kartaa rinjiyaal aan biyuhu lahayn ama dhaldhalaalka leh oo sii ahaan doona muddo dheer xitaa ka dib marka aad qoyso joogto ah. Rinjiyadan ayaa sidoo kale ka hortagaya wax kasta oo biyo gelin ah sidaa darteedna ha qoynin derbiyada musqusha.
Ma rabtaa inaad musqushaada ka dhigto mid ka daadato? Waxaad baran kartaa talooyin wax ku ool ah oo la xiriira qalabka musqusha sida qasabadaha musqusha si loo hubiyo in tan la sameeyo.
Hore:: Ka dhig jikadaada mid xariif ah oo leh qasabadaha jikada Next: Helitaanka Tubaale iyo Talooyinka Tuubooyinka si loo yareeyo Isticmaalka Biyaha
2021 / 09 / 27 2212